गैँडाकोट नगरपालिकाको चौँथो नगरसभामा के के भयो ? कसले के के भने ?
By vijayafm on	 April 27, 2019 कोरोना अपडेट, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, स्थानीय
गैँडाकोट, १४ बैशाख । गैँडाकोट नगरपालिकाको चौँथो नगरसभा विषयवस्तुमाथि प्रवेश नगरिकनै स्थगित भएको छ । गैँडाकोट नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरुले नगरकार्यपालिकाले श्रीपेच लगाएर हिँडेको आरोप समेत लगाएका छन् । नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत लगायतको बजेट बिनियोजनमा नगरसभाको भूमिका खोसी नगरकार्यपालिले एक्लौटी ढंगबाट अघि बढेको आरोप लगाएका हुन् । गैँडाकोट नगरपालिकाको ४२ औँ बैठकमा २ करोड ८३ लाखको बजेट विभिन्न शिर्षकमा बाँड्ने निर्णय गरिएको थियो । नगर सदस्यहरुले नगरकार्यपालिका, विधि र पक्रियामा अघि नबढेको आरोप लगाउँदै सभा अघि नबढ्ने बताएका थिए ।
नगरसभामा जेष्ठ नागरिक तथा गैँडाकोट ७ का वडा अध्यक्ष चोलानाथ उपाध्यायले स्वागत मन्तब्य राखेपछि अघि बढ्न सकेन । गैँडाकोट नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले अनुगमन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न उपप्रमुख विष्णुकुमारी कंडेललाई निवेदन गर्नुभयो । यस पश्चात् नगरसदस्यहरुले औपचारिक कार्यक्रम अघि बढ्न दिएनन् ।
गैँडाकोट नगरपालिका वाड नं. १ का सदस्य राजेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले नगरसभाले निर्दिष्ट गरेको योजना र बजेट वडा र कार्यपालिकाले रकमान्तर गर्न नसक्ने भन्दै ४२ औँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । नसच्याएसम्म नगरसभा अघि नबढाउन नगरसदस्यहरुले आग्रह गरे ।
नगरसदस्यहरु राजेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, प्रकाश सापकोटा, ईश्वरी चापागाईं, बालकृष्ण अधिकारी, तेजप्रसाद घिमिरे लगायतका नगरसदस्यहरुले आफ्नो अडान कायम राखेका थिए । एक छिन नगरसभा पक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो भएको थियो । पक्ष र विपक्षमा रहेर बादविवाद जारी रह्यो । विहान ९ बजेतिरबाट सुरु भएको नगरसभालाई अघि बढाउन सभाध्यक्ष समेत रहनुभएका नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले कोशीस जारी राखेपनि अन्ततः साढे १० बजेतिर नगरसभा २ घण्टाका लागि स्थगित रहयो ।
करिब १२ बजेतिर पुनः सुरु भएको नगरसभामा नगरसदस्यहरुको अडान कायमै भएपछि सभाले पूर्णता पाउन सकेन । नगरको बजेट पूरक बजेट ल्याई अर्थात नगरसभाले अनुमोदन गरेर कार्यपालिकाले कार्यन्वयनमा लैजानुपर्नेमा नगरसभाको अस्तित्वनै नराखी काम गरेको भन्दै वडा सदस्यले असन्तुष्टि राख्ने क्रम जारी रह्यो । विषयगत समितिहरुमा छलफल नै नगरी कार्यपालिकाको निर्णय प्रति पनि नगरसदस्यहरुले गुनासो राखेका छन् ।
नगरसदस्यहरुले विषयगत समितिको समेत विचार सभामा राखिनुपर्दछ भन्ने माग आएपछि नगरसभाध्यक्ष छत्रराज पौडेलले विषयगत समितिका संयोजकहरुलाई बोल्न दिनेकी नदिने मतान्तर गराउनुभयो । बोल्न दिने पक्षमा २३ मत र नदिने पक्षमा ४ मत परेपछि विषयगत समितिका संयोजकहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
विषयगत समितिका संयोजकहरुको धारणा यस्तो थियो ?
पूर्वाधार तथा विकास उपसमिति संयोजक कुमारी रेखा पौडेलले विषयगत समितिमा छलफल गर्न नमानिएको बताउनुभयो । यतिमात्र नभएर ४२ औँ कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरिएको भन्दा बाहिरका एजेण्डा निर्णय गरिएकोमा आफूहरुलाई अमान्य रहेको बताउनुभयो । यसैगरी उहाँले भन्नुभयो “नीति र नियमलाई थातिमा राखेर चित्त बुझाउने गरी अघि बढीयो भने यसले गलत नजिर बसाउने । विषयगत समितिमा छलफल र पुरक बजेट नल्याई नगर कार्यपालिकाले निर्णय गर्नु गलत अभ्यास भएको हो” पौडेलले आफूले पनि कार्यपालिकाको सदस्यको हैसियतले हस्ताक्षर गर्दा गलत गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
यसैगरी सामाजिक तथा जनसंख्या समितिका संयोजक ध्रुवराम पौडेलले नगरसभामा रकमान्तरको कुराले विषयान्तर गराएको बताउनुभयो । केही वडामा भएका गलत अभ्यासका कुराले सिंगो नगरसभाको मर्यादालाई अप्ठेरो पार्न नहुने पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो “ब्यापक छलफल भएर नीति तथा कार्यक्रम गराउनु पर्ने थियो । त्यसो नहुँदा आज विषयान्तर हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराएको छ”
वन वातावरण समितिका संयोजक शिवकान्त तिवारीले नगरको स्पष्ट कार्यविधि नभएकै कारण विषयगत समितिहरु ओझेलमा परेको बताउनुभयो । विषयगत समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै तिवारीले कार्यपालिकाको बैठकमा आफूहरुले गलत गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
संस्थागत विषयगत समितिका संयोजक चोलनाथ उपाध्यायले कानुन निति, नयाँ जनप्रतिनिधि भएका कारण केही कार्यप्रणालीमा समस्या भएपनि अब सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उपाध्यायले खर्च हुन नसकेका र आवश्यक नभएका योजनाहरुलाई रकमान्तर गरेर अघि बढ्नपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
वडा अध्यक्षहरु के भन्छन् त ?
गैँडाकोट १ का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद सापकोटाले विषयगत समितिबाटै अघि बढ्न आग्रह गर्दै विषयगत समिति र कार्यपालिका दुबै वीन वीन हुने गरी मध्यमार्गी अपनाउनुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।
गैँडाकोट २ का वडा अध्यक्ष ध्रुवराम पौडेलले आफैले कार्यपालिकाको बैठकमा गरेको निर्णय आफैले मान्दीन भन्नु जायज तर्क नरहेको बताउनुभयो । बेतर्कका कुरा छाडेर नगरसभा सुचारु गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
गैँडाकोट ३ का वडा अध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले गल्ती भए सच्चिन तयार रहेको बताउँदै वनवातावरण विषयत समितिका कार्यविधि बनाएर संगसंगै अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
गैँडाकोट ४ र ५ का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपाने र नवराज कंडेलले फास्ट ट्र्याक बाट काम अघि बढाउँदा समस्या भएको र कसैको पनि नियत खराब नभएको बताउनुभयो । सबेले जित्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
गैँडाकोट ६ का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी सापकोटा, गैँडाकोट ७ का वडाअध्यक्ष चोलानाथ उपाध्याय, ८ का वडा अध्यक्ष डिलाराम रिजाल, १२ का अध्यक्ष थिरबहादुर थनेत, १४ अध्यक्ष कोकीसरा रानामगर, १५ का अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, १८ का वडा अध्यक्ष तिलबहादुर चितौरे लगायतका अध्यक्षले सुधार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
गैँडाकोट ९ का अध्यक्ष प्रेमप्रसाद सापकोटाले गल्तीभएको ठाउँमा सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । तर कहिले निर्णयमा सहमति जनाउने अनि कलहको विउ बनाउने कामले नगरको समृद्धि अभियानमा प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।
ग्ैौँडाकोट १० र ११ का वडा अध्यक्ष देवीदत्त कंडेल र गुरुप्रसाद सुवेदीले विषयगत समितिले आज आएर कुरा उठाउनुभन्दा पहिले किन मौन बस्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । वडा अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो “लगन पछिको पोतेको कुनै अर्थ राख्दैन यो बहस त्यस्तै हो, पहिले मौन बस्ने अहिले आएर बोल्नु जायज होइन” ।
गैँडाकोट १४ का वडा अध्यक्ष पदम पौडेलले लोकतान्त्रिक पक्रियामा आफूलाई लागेको मात्रै सहि नहुने बताउनुभयो । विधिअनुसार चल्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । प्रशासकहरुले पनि बेलैमा सहि मार्ग निर्देश गर्न नसक्नुले पनि समस्या उत्पन्न भएको पौडेलले बताउनुभयो । १६ का अध्यक्ष गोवर्धन ज्ञवालीले विषयगत समितिको औचित्य नभएको बताउनुभयो । विषयगत समितिले गत बजेटमा नगरस्तरीय बजेट १६ मा शुन्य पारेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो ।
नगरसभामा उपस्थित कार्यपालिका सदस्य सबैले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । नगरकार्यपालिका सदस्यहरुले सच्यिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । विधि र पक्रिया नजान्दा गल्ती भएको स्वीकार समेत गरेका छन् ।
गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यले नगरसभाले जबसम्म निर्णय गर्न सक्दैन तबसम्म ४२ औँ बैठकका योजनाको नयाँ सम्झौता नहुने बताउनुभयो ।
गैँडाकोट नगरपालिका उपप्रमुख विष्णुकुमारी कंडेलले ऐनको आडमा आफूहरु हिँडेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “बहुमत दम्भ होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अधिकार प्रयोगको मात्रै गरेका हाँै, अधिकारको प्रयोग गर्नु दम्भ हो भने प्रदेश र केन्द्र सरकार पनि दम्भले नै चलिरहेका छन्” । नगरप्रमुखले विवेकपूर्ण निर्णय गर्दै छिट्टै नगरसभाको आह्वान हुने नगरउपप्रमुखले बताउनुभयो ।
गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेल
गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेलले सबैका जवाफ दिदै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा इतिहासमै यस्तो अवस्था आफूले थाहा नपाएको बताउनुभयो । एजेण्डा नपस्किकनै सभा विथोल्ने कार्य लोकतान्त्रि पद्धति कसरी हुन्छ प्रमुख पौडेलले प्रश्न गर्नुभयो । पौडेलले भन्नुभयो “ विषयगत समिति आफै जिम्मेबार नबने, मैले बैठक नराख्नुस भनेको छु र ? बारबार विषयगत समितिको बैठक बोलाउन आवश्यक पनि देख्दिन, यसरी नै नगरकार्यपालिकाले निर्णय गरेका योजना कार्यन्वयमा न लैजाने हो भने समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना हुने छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? विषयगत समितिको काम प्रभावकारी देखेको छैन । यसको पुनःगठनको समेत सोच बनाएको छु । उपमेयरको न्यायिक समितिले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । ४२ औँ बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयनमा न लैजान समेत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष आग्रह गर्दछु । नगरबासीलाई बन्धक बनाउने योे कार्यको जाहेज नभएको बताउँछु । विषयवस्तुमाथि प्रवेश नगरिकनै सभा स्थगित भएको जानकारी गराउँदछु” । सभाको स्थगन पश्चात विजय एफएमसंग कुरा गर्दै नगरप्रमुख पौडेलले अब चाँैथो नगरसभाले पूर्णता पाउने सम्भावना कम भएको बताउँदै अब सिधै बजेट अधिवेशन हुने समेत बताउनुभयो ।
विषयवस्तुमा नै प्रवेश नगरी सकिएको गैँडाकोट नगरपालिकाको चौँथो नगरसभा कहिले बस्छ । अनिश्चित भएको छ । नगरसभाले ४२ औँ बैठकका निर्णयहरुलाई अनुमोदन नगरेसम्म करिब २ करोड ८३ लाखका योजना सम्पन्न हुने छैनन् । नगरपालिकाको समृद्धिका लागि विधि र एकता दुबै आवश्यक रहेको नगरसभासदस्यहरुको सुझाब समेत रहेको छ ।